नेकपाका दुवै पक्षको संसदीय दलको बैठक बस्दै, कसको बहुमत होला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपाका दुवै पक्षको संसदीय दलको बैठक बस्दै, कसको बहुमत होला ?
फागुन २१ गते, २०७७ - १०:०७
काठमाडौं । विवादरत नेकपाका दुवै पक्षले शुक्रबार र शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले शुक्रबार दिउसो १ बजे संसद बोलाएको छ भने ओली पक्षले शनिबारका लागी दलको बैठक बोलाएको छ ।
दुवै पक्षले आआफ्नो पक्षमा बुहमत रहेको दावी गरिरहेको भएपनि कतै पुष्टी भएको थिएन । दुबै पक्षले आआफ्नो तयारी अनुरुप संसद बैठक बोलाएपछि बैठकमा उपस्थितीको संख्याले कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर पुष्टी हुनेछ ।
पार्टीमा भारी मतले अल्पमतमा रहेका ओली पक्षिय नेताहरुले संसदिय दलमा आफु बहुमतमा रहेको दावी गर्दै आईरहेको छ ।
पार्टी एकता दवाव अभियान संचालन गरिरहेका वामदेव गौतमका पक्षमा रहेका कही सांसदहरु अझै खुलिसकेका छैनन् । उनीहरु जता खुल्छन् त्यसले पनि कसको पक्षमा बहुमत पुग्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुने केही नेताहरुको अनुमान रहेको छ ।
फागुन २१ गते, २०७७ - १०:०७ मा प्रकाशित